MediaTek's processor -ka 5G waxaa lagu soo saari doonaa 7 nm | Androidsis
Qalabka MediaTek ee leh 5G waxaa lagu soo saari doonaa 7 nm
Waxaa la filayaa in sanadka 2020 Processor -kii ugu horreeyay ee MediaTek oo leh 5G ayaa suuqa ku dhacay. Sumadda Shiinaha ayaa durba kor u qaadaya processor -kan, si marba marka ka dambaysa loo ogaan doono. Hadda waxaan helnaa waxoogaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jajabkan cusub ee sumadda, kaas oo laga bilaabi doono bartamaha dhexdeeda.
MediaTek ayaa sidan u rajaynaysa inay 5G u keento dhexda, wax shaki la'aan macnaheedu noqon karo inay suuqa ku iibin doonaan unugyo badan oo isku mid ah. Taariikhda la bilaabay mid la mid ah weli lama xaqiijin, laakiin waxay ahaan doontaa mar uun sanadka soo socda.
Faahfaahin muhiim ah waa taas processor -kan MediaTek waxaa lagu soo saari doonaa 7 nm. Tallaabo muhiim u ah baaxadda soo -saareyaasha shirkadda, sidaa darteed waxaan ka filan karnaa wax -qabad ka wanaagsan, marka lagu daro hufnaanta tamarta oo fiican.
Shirkadda ayaa sidoo kale adeegsan doonta modem u gaar ah si ay u qalabeyso processor -kan 5G. Waxay ku saabsan tahay Helio M70, kaas oo ah modem u gaar ah oo ay iyagu naqshadeeyeen, si ay ula jaanqaadaan 5G. Intaa waxaa dheer, waxay la jaanqaadi doontaa SA iyo NSA labadaba, taasoo u oggolaan doonta in la isticmaalo muddo dheer.
MediaTek ma aysan xaqiijin wax badan oo ku saabsan processor -kan. Waxaan ognahay oo kaliya inay mar uun suuqa soo geli doonto 2020. Ma jiraan sumado ama moodallo la xaqiijiyey xilligan, in kasta oo hubaal ah soo -saareyaal badan oo Shiine ah sida OPPO, Vivo ama Xiaomi aakhirka ku isticmaal taleefoonadooda.
Markay bilooyinku maraan ayaan awoodi doonnaa tag wax badan oo ku saabsan processor -kan MediaTek. Xaqiiqdii waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa ballaarinta 5G dhexdeeda dhexdeeda, taas oo la filayo inay noqoto wax dhici doona sannadka soo socda, maaddaama soo-saareyaashu ay ka shaqeeyaan lahaanshaha taleefannada ku habboon qaybtan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Qalabka MediaTek ee leh 5G waxaa lagu soo saari doonaa 7 nm